Archive du 20161207
Ranomasimbe Indianina I Neny no filoha
Hisokatra anio alarobia amin�ny fomba ofisialy eto Antananarivo Renivohitra ny fivoriamben�ny AVCOI (Association des Villes et Collectivit�s de l�Oc�an Indien).
DISTIM Ambohimanarina Mitohy ny fanamafisana orina ny antoko
Mitohy ny fitsidihina sy fanamafisana orina ny antoko TIM, araka ny toromarika nomen'ny Filoha Nasionalin�ny TIM, Atoa Marc Ravalomanana.
Toavina Ralambomahay �Misy minisitra tokony hosoloina�
Hafahafa ny fandehan�ny raharaham-pirenena, hoy ny mpandinika politika, Toavina Ralambomahay, satria vitsy dia vitsy ny solombavambahoaka nifidy ny lal�na mikasika ny tetibolam-panjakana.
Asa fanakorontanana Mampitandrina ny Kung fu
10,4 miliara dolara no famatsiam-bola azon�i Madagasikara taorian�ny fivoriana tany Paris ny 1 sy 2 desambra lasa teo.
Aza mihevitra anay ho vendrana e !
Mbola lasa ihany ny saina ankehitriny ry Jean hoe tamin�ny fomba ahoana ary no nahazoanareo fankatoavana ka nahatonga ny vozongo hampindrana volabe anareo a !
Fiarahan�ny mitovy fananahana Zava-doza ho an�ny Malagasy
Foto-kevitra sy foto-pisainana voizina amin�izao fotoana izao ny fanomezana vahana ny fiarahan�ny olona mitovy fananahana na ny LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender).
Tsy maintsy lava izao
Voizina eo amin�ny sehatra iraisam-pirenena fa ny varotra amin�ny alalan�ny hairaha vaovao izao no malaza dia milaza ireo tompon�andraiki-panjakana fa tsy maintsy miditra amin�izay isika na tsy mahay mamaky teny sy manoratra aza.
Lal�nan�ny fanaovan-gazety Be ny lesoka, hoy ny mpandinika
Nampahafantarina tamin�ny fomba ofisialy tetsy amin�ny caf� de la gare Analakely omaly ny voka-pikarohana iray mikasika ny tontolon�ny asa fanaovan-gazety eto amintsika,
Minisiteran�ny asa sy ny lal�na sosialy Tale nisoloky 17 tapitrisa ariary
Misesisesy ny raharaha maloto andrenesana anarana tompon�andraikitra ambony eto amin�ny firenena.
Mitango vola sady mampihorohoro Tra-tehaka ireo � inspektera CUA � sandoka
Saron'ny tompon'andraikitra ao amin�ny Fiadidiana ny tan�nan�Antananarivo Renivohitra, teo am-panatanterahana asa fisolokiana efa mahazatra azy,
"Chambre" fanaovana firaisana Mandeha be ny tsena
Anisan�ny toerana iray be mpitsidika tato ho ato, indrindra fa ho an�ireo mpifankatia miafina ny efitrano eny amin�ireny hotely fandraisam-bahiny ireny.
FELANA RAVELOARISON Namoaka ny boky �mpandrary fitia�
Namoaka ny boky �mpandrary fitia �indray i Felana Raveloarison, mpanoratra malaza tsy zoviana amintsika intsony, mpikambana mavitrika eo anivon�ny Fikambanan�ny Mpikabary Malagasy ( FIMPIMA).
Fikambanana Tittel Nahazo tohana avy amin�ny Airtel
Betsaka ireo fikambanana te hanohana sy handray an-tanana ireo olona manana fahasembanana eto amintsika, indrindra fa ny ankizy saingy ny hoenti-manana no tsy ampy.
Fanatsarana ny fitateram-bahoaka Mila tolo-bidy iraisam-pirenena
Avy amin�ny hetra avokoa ny 40% amin�ny vidin-tsolika, ka tokony hahena io hetra io satria miankina amin�io vidin-tsolika io avokoa ny vidin-javatra eto amin�ny firenena.
Tsipy kanetibe Homena trano sa fiara izy efa-dahy tompondaka erantany ?
Tompondaka erantany amin�ny tsipy kanetibe i Madagasikara, taorian�ny andiany faha-47 notanterahina teto amintsika.